Shina gel maimaim-poana any an-tany, gel antibacterial, Mpanamboatra sy mpamatsy akora antibacterial
Description:Taratra tanana maimaimpoana rano,Gel anti-bakteria,Gel tanana antibacterial,Mpanadio tanana,,
Home > Products > Gel-tanana maimaimpoana rano
Ny vokatra avy amin'ny Gel-tanana maimaimpoana rano , mpanofana manokana avy any Shina, Taratra tanana maimaimpoana rano , Gel anti-bakteria mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Gel tanana antibacterial R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
AK MSDS 300Ml Hopitaly manohitra ny bakteria tanana Sanitizer  Contact Now
Kitapom-pokona 60ml tànana madio tsy misy rano Sanitizer  Contact Now
Amin'ny Stock Sell 500ML Satinizer Gel Hand Cleaner  Contact Now
Mpanamboatra trano fanatanjahan-tena 60ML 100ML 250ML 300ML 500ML  Contact Now
Sobika fotsy 500Ml Guard Instant Hand Sanitizer  Contact Now
AK MSDS 250ML Gel Hand cleaner  Contact Now
500Ml Toeram-pitsaboana momba ny antibakelika tanana 500Ml  Contact Now
Sanitizer gel haingana fanamainana ny alikaola  Contact Now
Mangatsiaka ranom-boaloboka tanana tsy misy rano any Sanitizer  Contact Now
300ML Antibacterial gel miaraka amin'ny Sanitizer Hand Alcohol  Contact Now
Havitrika tanana anton-tsolika 250ML  Contact Now
Drafitra mavesatra ny tanana tsy misy rano 500ml  Contact Now
Afo ny tanana 60ML Alika Antibacterial Gel  Contact Now
Ampifamadiho 3oz 100ml tsy fahita firy Sanitizer Hand Gel  Contact Now
500ML amin'ny stock Rub an-tanana toaka  Contact Now
Fihenam-bidy Antibacterial 500ML Hand Gel  Contact Now
500Ml Hand Sanitizer disinfectant Lemon Hand Wash Liquid  Contact Now
Voankazo Aloe 500Ml Mamporisika tokan-tsolika tanana San Sanerer  Contact Now
Vidin'ny singa: USD 1.2 / Piece/Pieces
Vidin'ny singa: USD 0.4 / Piece/Pieces
Vidin'ny singa: USD 1.5 / Piece/Pieces
Shina Gel-tanana maimaimpoana rano mpamatsy
1. Toerana azo ampiharina: hôpitaly, banky, toeram-pivarotana, unità, sinema, toerana fialamboly, sekoly, fianakaviana, hotely, trano fisakafoanana, seranam-piaramanidina, tokotanin-tsambo, gara, fizahan-tany sy tontolo iainana tsy misy loharanom-panasan-drano sy fanadiovana ny departemanta tantsambo.
2. Tandremo: ho an'ny fampiasana ivelany ihany, arovy ny zaza irery. Fadio ny fifandraisana amin'ny maso. Raha sendra fifandraisan'ny maso, sasao amin'ny rano betsaka. Manjavona, aza manala loharano tsy mahalala. Raha mahatsapa tsy salama ianao dia miangavy anao hitsahatra amin'ny tenanao amin'ny dokotera.
3. Famaritana vokatra: 250ml 450ml 650ml
4. Fampiasana: ampiharo ny habetsaky ny vokatra amin'ny tànan'ny tanana ary manosihosy azy amin'ny tanana roa mandra-maina sy tsy manasa tànana.
5. Sasao ny sanitera mando tanana dia antsoina hoe alikaola 75, izay afaka manala ny otrikaretina miady amin'ny bakteria, maina vaovao sy maina tsy misy ahitra, ary mihena haingana rehefa avy manosika tanana mandritra ny folo segondra.
6. Fampiharana azo ampiharina: mitondra fiara alohan'ny sy aorian'ny fisakafoanana, fialam-boly amin'ny asa, trano fandraisam-bahiny, fiara fitateram-bahoaka ary ao anaty lalamby. Ny fanadiovana tanana dia antoka ho an'ny fiainanao sy ny fahasalamanao.
Taratra tanana maimaimpoana rano Gel anti-bakteria Gel tanana antibacterial Mpanadio tanana Gel-tanana maimaimpoana rano